China NRC rubbering unhani Manufacturers uye Suppliers | Hongyuan
The chigadzirwa unogadzurudzirwa bhitumini isapinda unhani yaigadzirwa rabha dzakachinjwa nebhitumini anokosha yokuvirisa kuburikidza chinokosha muitiro. Zvinogona kushandiswa nevamwe isapinda membranes yokuumba ematongerwo isapinda rukoko. Kana yaishandiswa yakazvimirira isapinda layer nomumativi ayo anofanira kudzivirirwa kuputira rukoko. Product womuenzaniso uye Specification (yakaipa inobva kuvakwa nzira): Spraying mhando, kupenda mhando, grouting uye rakavhara mhando
● Self-reparation: mashoko haangavi kuparadzana panguva kuvakwa, izvo zvinogona kuumba yakatsiga uye musono isapinda rukoko. Waterproof rukoko wakaremara rokuvaka uye kushanda achava kuzvidzora pakugadzira kudzivirira mvura kubva vanoverevedza vachipinda isapinda layer uye kuti tirambe chamazuva ose isapinda rukoko. ● Adhesion: isapinda zvinhu anogona vakanamatira pamwe chawo kosi kunyange mvura kuitira zvakanaka isapinda mugumisiro apo STRUCTURAL deformation kunoitika. ● Leaching kuramba vari: isapinda zvinhu haangavi Leach nokuti nechikonzero muchivande mvura Flushing pashure kuvakwa.
● Chemical nemishonga: rakaisvonaka acid, alkali, uye munyu nemishonga chaitwa;
● kuvakwa Easy: yakaderera zvinodiwa pamusoro chawo kosi uye makasunungurwa kubva vavashandire kuti kupfupisa kuvaka kumwedzi, uye kuvakwa panguva kupisa yakaderera anobvumirwa;
● Nokuraramisa Easy uye kutarisirwa
● High zvikukutu kugutsikana, uye hapana yainge nyaya;
● Never zvigare, dzisiri chepfu, odorless, uye isina;
● The chigadzirwa anogona achengetedzwe achiita rakanamwa mugaba kwenguva yakareba, pasina kukanganisa mashandiro ayo.
Application Makuriro NRC non-zvigare rabha bhitumini unhani anogona kuiswa sezvo isapinda kurapwa kuti dzichangobva kuvakwa zvivako, kana kuti kugadzira tagovera isapinda rukoko. Zviri kushandiswawo mvura tsika nzvimbo, uyewo deformation majoini nezvimwe zvigaro zvepamusoro. Tichienzanisa nedzimwe isapinda zvinhu, ane nemamwe zvinobatsirawo isapinda kurapwa vawane zvigaro zvepamusoro.
● The chigadzirwa ringashandiswa aumbe isapinda layer kana kuti kuomerera dzisapinda membranes sezvo isapinda guruu, kuti aumbe ematongerwo isapinda rukoko. ● Rine zvakanaka namira maturo nemhando dzose dzisapinda membranes (kusanganisira EPDM rabha Kamudzira, polyethylene polypropylene faibha isapinda Kamudzira), izvo zvinogona kuumba ematongerwo isapinda rukoko. ● Kuomerera pamwe chawo kosi kuti aumbe ganda-kufanana isapinda rukoko kudzivirira channeling mvura;
● zvinodiwa Low pamusoro chawo kosi mwando, uye kuvakwa anogona chinozoiswa nokukurumidza kana mvura pamusoro chawo kosi ari kucheneswa, kuti kupfupisa kuvaka kumwedzi;
● dzakasiyana-siyana muitiro uye zvakakunakira kuvakwa: chigadzirwa vanogona kupendwa kana sprayed rokuvaka.
● Mutsindo pasi tembiricha constructability: mwaya kuvaka anogona chinozoiswa pasi pasi tembiricha ezvinhu.
● High anochinjika kuti STRUCTURAL deformation: mashoko ane kunoshamisa extensibility uye adhesion kuti zvakakwana zvinoenderana STRUCTURAL deformation, uye kudzivisa isapinda kukuvara rukoko kunokonzerwa STRUCTURAL deformation. Kana vanoumba rinoumba isapinda rukoko pamwe membranes, NRC non-zvigare rabha bhitumini unhani anogona kudzidza kuvenga zvose deformation mupfungwa kuvimbisa-refu intactness kuti zvinoumba isapinda rukoko.
Ematongerwo Construction pamwe Membrane (mwaya)
Heating pamusoro NRC Non-zvigare Rubber Bhitumini bemhapemha
Spraying pamusoro NRC Non-zvigare Rubber Bhitumini bemhapemha
Executive Standard: Non-zvigare Rubber Bhitumini (NRC) unhani (Q / 0783WHY003-2012)
Low Temperature yakandinakira
-20 ° C, hapana kutsemuka uku
-25 ° C, hapana kutsemuka uku
Thermal Nemishonga / ° C
No zvishoma nezvishoma mumatope, ruchiyerera kana anodonha
Thermal Kuchembera 70 ° C × 168h
-15 ° C, hapana kutsemuka uku
Zvinokambaira pasi Rokuparadzwa State / N / mm
Previous: miviri zvinoriumba isapinda unhani
Next: High kwakavharwa nenyama ukobvu acrylic inodya mvura unhani
Acrylic Waterproof bemhapemha, Tpo Waterproof Membrane , Zvichienderana Polymer-Cement Waterproof yokunamisa , Polyurethane unhani For Concrete , Single-Dzinogara Roofing Membrane , Water Base Polyurethane Waterproof yokunamisa ,